मौलिकता बिर्सदै तीजका गीत - Pradesh Dainik
मौलिकता बिर्सदै तीजका गीत
बुधबार, भदौ ०३, २०७७ , प्रदेश दैनिक संवाददाता
तनहुँ : हिन्दु नारीहरुको साँस्कृतिक पर्व तीज संघारमा छ । यसैलाई लक्षित गरेर सांगीतिक बजारमा सयौँ तीजका गीतहरु आएका छन् । गीतसंगीत पस्कने माध्यम बनेको युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती छन् तीजे गीत ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन् । तर, सांगीतक बजार भने त्यस्तो देखिदैन, चलायमान नै छ । कलाकारहरुको आम्दानीको मुख्य श्रोत देशविदेशमा हुने मेला महोत्सव र साँस्कृतिक कार्यक्रम फागुनदेखि हुन पाएन । आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमेर तीजका गीतमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हुने स्थितीमा पनि तिजे गीतका संख्यात्मक कमी खासै देखिएन यसवर्ष । नयाँ पुरानो सबै कलाकारले तीजका गीत ल्याएका छन् ।
यसपाली तीज गीतमा कोरोनाले निम्त्याएको संकट, सलह किराको त्रास, राजनीतिका परिस्थितिका व्यंग्य, नारी वेदना, चेली र माईतीबिचका गन्थनमन्थनजस्ता विषय नआएका पनि होईनन् । तर केही गीत यस्ता आए, जस्ले तीजको मर्म र मौलिकतालाई ठाडै प्रहार गरे । दुई अर्थ लाग्ने उट्पट्याङ शब्दको प्रयोग व्यापक बनेको छ । अझ युट्युबमा दर्शक बटुलन अपाच्य शिर्षक राखेर सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
दशकयता कलाकारलाई लाग्दै आएको आरोप हो ‘तीज गीतलाई रत्यौली बनाए, मौलिकता हरायो ।’ यसपाली पनि सर्जक टाढा रहेनन् यस्ता आरोपबाट । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजारमा ल्याईने हल्का तीजका गीत जिवन्त नरहने अग्रजहरु बताउँछन् ।
बजारमा आएका तीज गीतले मौलिकतालाई बिर्सिएर गाईजात्रे बनेकोे बताउँछिन् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञसमेत रहेकी वरिष्ठ लोकगायिका हरिदेवी कोईराला ।
सस्तो लोकप्रियता कमाउन मौलिकता भुलेर परिवारमा बसेर हेर्न नमिल्ने गाईजात्रे तरिकाले प्रस्तुत हुँदा संस्कृतीलाई ठुलो क्षति पुग्ने उनको ठम्याई छ । ‘तीज गीत पर्व गीत हो । यसमा पर्वको मर्म, धर्म र संस्कार हुन्छ । पर्वले खोज्ने मौलिकता र महिमा हुन्छ । हिजो र आजका गीतलाई तुलना गर्दा भोलिको पुस्ताले के सिक्लान् ?’ उनलाई यही कुराले पिरोल्छ ।
रत्यौलीजस्तै सुनिने तीज गीतले माया पिरतीका कुरालाई प्रश्रय दिएको छ । तर, तीजका गीतले सामाजिक भोगाई र चेतनालार्ई समेट्नुपर्ने कोईराला बताउँछिन् । ‘सासु–बुहारीको जुहारी र चेलीको विरह बिलौना मात्रै तीज गीतले समावेश गर्नुपर्छ भन्ने होईन । चेलीले राष्ट्रको चेतना, परिर्वतन, भ्रष्टचार, राजनीतिजस्ता विषयलाई पनि उठान गर्न सक्छन् । प्रस्तुतीमा भने शिष्टता, शालिनता र समाजलाई मार्गदर्शन गरेको हुनुपर्दछ’, उनले भनिन् ।
लहड र रहरमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन तिज गीतलाई हास्यस्पद बनाइएको उनको गुनासो छ । तीजे गीतमा गरिएको नयाँनयाँ बाजागाजाको प्रयोगप्रति कोईरालाले असहमती जनाईन् । ‘नयाँ प्रयोग गर्न त अन्य विधाका गीतसंगीत छदैँछ । कलाकारको धर्म मौलिकता जोगाउनु हो । तसर्थ संस्कृतीलाई सके सपारौँ, सक्दैनौ कसैले पनि बिगार्ने प्रयत्न गर्नहुँदैन । संस्कृतीको संरक्षण सम्र्बद्धन गर्नुपर्दछ’ उनको सुझाव छ । उनको विचारमा गीतसंगीतमा व्याप्त विकृती न्यूनिकरणमा दर्शक, श्रोता र सञ्चारमाध्यमले भुमिका खेल्न सक्छन् ।
नयाँ पुस्ताका कलाकारले बिगारेका तीज गीत गाउँघरमा भने उस्तै मौलिक सुन्न पाईने कोईरालाको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘जति रेकर्डमा बिग्रिएको छ, गाउँघरमा हुने प्रतियोगितामा दिदीबहिनीले गाउने तीजका गीत सुनौँ त ! बिग्रिएको छैन विल्कुल । त्यहाँ आफ्नै मौलिक लय र ठेट भाषा सुन्न सकिन्छ, आफ्नै विरह वेदना अनि संस्कार छन् । तर, व्यवसायिक उद्देश्यले गाईएका गीतमा होडबाजी छ विकृतिको ।’
उनले गीतसंगीत सुधार्न सेन्सर बोर्डको आवश्यकता औल्याईन् । ‘पहिला हामीले गीत रेकर्ड गर्दाखेरी अरुसंग शब्द लय जुध्छ की भनेर सोधखोज हुन्थ्यो’, उनले स्मरण गर्दै सुनाईन्, ‘अहिले सेन्सर बोर्ड नहुनाले पनि विकृतिले जरो गाडेको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’ कोईरालाले २०४५ सालदेखी निरन्तर तीजका गीत गाउँदै आएकी छिन् ।
बजारमा छ्यापछ्याप्ती आएको गीतहरू तीजे गीत नै भन्न नसक्ने खालका रहेको लोकगीतका अध्येतासमेत रहेका पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डा. कुसुमाकर न्यौपाने बताउँछन् । केही वर्षयता तीजका गीतमा विकृति बढेर मौलिकता गुम्दै गएको उनले बताए । तीजका गीतमा करुणभाव र भक्तिभावको प्रवलता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । आजभोली तीजका गीतभन्दा बढी रत्यौली गीत बजारमा आउँछन् । ‘किनकी तीजका गीतमा प्रयोग हुने करुणभाव र भक्तिभावका प्रवलताको सट्टा हास्यभाव प्रयोग गरिएका छन्’, उनले भने । न्यौपानेले थपे, ‘तीजे गीतको विस्तार भएको छ, त्यसलाई स्वच्छ ढंगले ल्याईदिएको भए राम्रो हुने थियोे । नत्र भने निफानेर केलाउनपर्ने परिस्थिती सिर्जना भयो, यो पिडादायी कुरा हो ।’
एकातिर तीजका गीतले मौलिकता गुमाएका छन्, अर्कोतर्फ जेठबाटै सांगीतिक बजारमा तीजका गीत भन्दै धमाधम सार्वजनिक हुन्छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘तीजका गीत गाउने अवधी हुन्छ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीदेखी पञ्चमीको दिनसम्म मात्र तीजका गीत गाइन्छ’, उनले भने, ‘जन्माष्टमी नआउँदै महिनौ दिनअघि र पञ्चमीपछि पनि तीजका गीत सुनिन्छ, यो विकृति हो ।’ सरकारी तहबाटै नीति नियम बने विकृति निराकरणमा सहज हुने उनी बताउँछन् । स्वयम कलाकार अनुशासित बनेको खण्डमा विकृती हट्दै जाने डा. न्यौपानेको धारणा छ ।
तीजका गीतमा व्यापक विकृती भित्रिएको स्विकार्छन् राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश बिजी । व्यापारीको कब्जामा गीतसंगीत भएकाले मौलिकता गुमेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘गीतसंगीतमा जब व्यापारीकरण गरेर कमाउने मात्रै ध्येय राखेका स्रष्टाको नाममा व्यापारीको प्रवेश भयो, त्यसपछि मौलिकतामाथि ठुलै प्रहार भएको छ । त्यो वर्षेनी हुदैँ आएको छ ।’
तीज गीतको मर्म खोज्नै पर्ने बेला आएको अनुभव गरेका छन् बिजीले । प्रतिष्ठानले यसबर्ष विकृती विसंगती न्युनीकरण कार्यदल गठन गरेर दुई अर्थी राखेका गीतको शिर्षक परिवर्तन गराएको उनले सुनाए । सरकारी आधिकारितकता प्राप्त नभएकाले कारबाही गर्न नसकेपनि नैतिक दबाब भने प्रतिष्ठानले दिएको उनले बताए । ‘अटेरी गर्ने कलाकार र सर्जकलाई कालोसुचीमा राखेर प्रतिष्ठानले बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यौँ’, उनले भने ।
अग्रजहरु नयाँ पुस्ताले विकृती भित्राएको आरोप लगाउँछन् । तर, पछिल्लो पुस्ताका कलाकार स्विकार्न तयार छैनन् । गायिक प्रिती आले भन्छिन्, ‘तीजको गीतमा विकृती हामीले भन्दा पनि अग्रजहरुले नै ल्याईसक्नु भाथ्यो । मौलिकता नै खोज्दा हिजोका दिनमा दिदीबहिनीले मात्र तीज गीत गाउने चलन थिए । पछि गएर पुरुष दाजुभाईले दोहोरी बनाईदिनुभयो । परिवर्तनहुँदै रत्यौली बन्यो । विकृती भित्र्याउने त अग्रजहरु नै हुनुहन्छ ।’ उनले अग्रजप्रति व्यंग गर्दै भनिन्, ‘आप गरे त प्यार, हाम गरे त बलात्कार ।’ पुरानो पुस्ता सच्चिएको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना नहुने उनले बताईन् ।
पुरुषले गाएर नाच्दैमा तीजका गीतमा विकृती भन्न नमिल्ने गायक तथा मोडल राजु ढकाल बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय पुरुषले गाएका तीज गीतमा विकृती देखिएको महसुस गरेका छन् उनले । ‘सबै पुरुषले गाएका गीतले मौलिकता बिर्सिएका छैनन् । सन्देशमूलक पनि छन् । केहीले युट्युब भ्यूअर्स र सस्तो लोकप्रियताका लागी ल्याएको देखिन्छ’, उनले भने ‘तीजमा कस्तो गीत गाउँथे त्यसलाई मनन गरेर सिर्जना गर्नुपर्छ ।’